Obbolaawwan paartilee Tigiraayiifi Eritiraa araarsuuf socho'an - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright CELEBRITY EVENTS
Goodayyaa suuraa Abrahaam Gabiralibaanosiifi Habtoom Gabralibaanoos
Itoophiyaafi Eritiraan waraana hamaa erga gaggeessaniin booda nagaaf karra isaanii waggoota 20f cufanii turaniiru.
Uummattootaafi hayyuuwwan biyyattii walitti qabuun mootummaa biyyoota lamaanii irratti dhiibbaa gochuuf obbolootni yaadan dhaabbata 'Selbiriitii Eventis' jedhamu hundeessan.
Obbolaawwan Abrahaam Gabiralibaanosiifi Habtoom Gabralibaanoos jedhaman waltajjiiwwan garagaraa qopheessuun sochii taasisaa turaniiru. Amma immoo ABUTif Adda Dimookiraasii fi Haqa Uummataa kana dura Adda Bilisummaa Uummata Ertiraa jedhamuun waamamu araarsuuf sochii jalqabuu isaanii ibsaniiru.
Sochiin inni jalqabaa guutummaan guutuutti milkaa'uu kan dubbatu Abrahaam "Uummatni waliin tahee mootummaan lameen akka araaraman dhiibbaa taasisuu danda'u," jedha.
Dhaabbatni isaanii 'Selebriitii Evantis' jedhamu yeroo garaagaraatti waltajjiiwwan marii 'faarfannaa'fi mataduree 'nagaa' jedhuun qopheesseera.
'Oromoon waldhabdee biyyoota lamaaniitiin miidhame malee bu'aa hinarganne'
''Sochiin kuni erga jalqabee lammiiwwan Itoophiyaafi Eritairaa iddoo jiraniitii dhiibbaa taasisuu jalqaban'' kan jedhu Abrahaam, 'Selebriitii Evantis' hayyuuwwan dhimma biyyooti lamaanii irratti yaada dhiyeessuu otoo danda'anii warra waltajii dhabaniif waltajjii uumaa jira jedha.
Manguddooti biyyaafi abbootiin amantii Itoophiyaa fi Eritiraa akka walitti dhiyaataniifi dhiibbaa akka uuman hojjechuusaanis hima.
Banamuu daangaa biyyoota lamaan hordofee 'Selebriitii Evantis' qophii muuziqaa Maqaleetti qopheessan irratti namooti jaalalaafi wal yaaduu isaanii walii ibsaa turan, jedha.
ABUT fi Adda Dimookiraasii fi Haqa Uummataa
'Selebriitii Evantis' hayyuuwwaniin deeggaramuun biyyoota lameen irratti qorannoo gaggeessaa akka jiru Abrahaam, ''nagaan amma argame akkamitti itti fufuu danda'a? jechuun qorannoo gaggeessuu barbaannee turre.
Paartileen lameen kuni walitti dallanuun isaanii karaa fagoo akka isaan geessineefi araaramuun isaanii immoo nagaa buusuuf barbaachisaa akka tahe hubanne.
Qorannichi gaaffi jajjaboo baayyee kan gaafate yoo tahu, ''bu'aan qoranichaa paartileen lameen kuni walitti mufachuun isaanii uummata irratti dhiibbaa qaqqabsiisaa akka jiru agarsiisa.
Waliigalanii hojjechuu dhabuu isaaniitti, Gaanfi Afrikaa illee nagaa qabaachuu hin dandenye.Wal mormuu malee nagaafi misoomaaf waliin waan hojjetan miti.''
Qorannoon isaanii yoo xumuramu, nagaan biyyoota lameenii amansiisaa akka tahuuf paartiilee lamaan kana araarsuun fala akka tahe dubbata.
Akeekni 'Selbiriitii Eventis' ammaa waltajjii paartileen lameen rakkoo isaanii itti hiikkatanii uumuu dha. Kuni taanaan nagaa argame kuni amansiisaa akka tahu amanu obbolaawwan kuni.
''Kunimmoo uummattoonni Tigraay yaada malee akka qotan,bitanii akka gurguranfi akka wal fuudhan taasisa'' haalli amma garuu yaaddoo baayyee qaba jedha.
Paartileen lamaan kuni araaramuu danda'uu?
Pireezidantiin Eritiraa waamicha Itoophiyaa irraa isaaniif taasifame yeroo fudhatanitti yeroo ABUT akka darbe dubbatanii ture.
Itoophiyaa yeroo dhufanittis miilli isaanii Tigraay ejjechuu dhabuu isaaniin namoota baayyee ''namichi ammayyuu mufatanii jiru'' akka jedhan godheera.
Gama biraan qondaalaa ABUT olaanoo Abbaay Tsahaayyee nuti 'gadoo dhiisneerra' isaan yoo dhiisan maali? jechuun dubbataniiru.
''Inni guddaan uummatni dhaabotni kunneen akka araaraman barbaaduu isaati. Hoggantoota irratti dhiibbaa gochuun isa lammataati'' jedha Abrahaam, uummatanis araaramuu paartilee lameen akka barabaadu qorannoo taasisaniin mirkaneessuu hima.
Gara mootummaa lameenii xalayaa erguunis deebii gaarii akka argatan dubbata,''lakkii kan jedhe hin jiru, hamma yoonaa nu tumsaa jiru'' jechuun abdiin akka jiru dubbata.